စိုင်းလူခေး ဆိုတဲ့ ပရဟိတ လူငယ်လေးဟာ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့က ခက်ခဲတဲ့ ရွာတွေကို သွားရောက် ကူညီရင်း လမ်းဘေးမှာ စက်ဘီးအပျက်တစ်စီးနဲ့ ကလေးလေးကို တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. .အဲဒီကလေးကို တွေ့တာနဲ့ သူက စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ခုလို Post တင်ခဲ့ပါတယ်
ဒီကလေးရဲ့ အိပ်မက်က စက်ဘီး တစ်စီး ပိုင်ချင်တယ် တဲ့…ညီလေးရဲ့. .အကြီးမားဆုံး အရိုးရှင်းဆုံး အိပ်မက်ကို ကျနော် ကြိုးစား ဖြည့်စည်းပေးချင်တယ်. .
.စက်ဘီး တစ်စီးထမ်းပြီး ညီလေးရှိရာ လာခဲ့မယ်ဗျာ. . ခက်ခဲဒေoက လယ်ခေါင်းရွာ….သိပ်မကြာညီလေးရဲ့ အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာတော့မှာပါ ဆိုပြီး Post တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ခုတော့….သူ့စိတ်‌ကူးအိပ်‌မက်‌‌တွေတကယ်‌ဖြစ်‌လာပြီ….စိုင်းလူခေးဆိုတဲ့ လူငယ်လေးက ဒီတစ်ခေါက် အဲဒီခရီးကို အသွားမှာ အဲဒီကလေးအတွက် စက်ဘီးတစ်စီး သယ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်
ခက်‌ခဲ‌ဒေသကို ပရဟိတခရီးသွားရင်‌းလမ်‌းမှာ ဒီညီ‌လေးကို ‌တွေ့လိုက်‌တယ်‌. နောက်‌ဘီးမပါတဲ့ စက်‌ဘီးကို အဆင်‌‌ပြေသလိုပုံစံအမျိုးမျိုးစီးလို့စကား‌ပြောကြည်‌့လိုက်‌‌တော့. . သူစက်‌ဘီးတစ်‌စီး အရမ်‌းလိုချင်‌တယ်‌တဲ့ ….ဒါက တကယ်‌ရိုးရှင်‌းတဲ့ သူ့ရဲ့ အိပ်‌မက်‌ပါပဲ. .
ဒီ‌နေ့‌တော့. .သူ့ကို ကြိုတင်‌မ‌ကြောင်‌းမကြားပဲ စက်‌ဘီးကို ခက်‌ခက်‌ခဲခဲသယ်‌ယူပြီးသူ့ကို လက်‌‌ဆောင်‌အဖြစ်‌‌ပေးလိုက်‌တယ်‌…ကျ‌နော်‌နဲ့ စက်‌ဘီးကို မြင်‌လိုက်‌တာနဲ့. .ပါးစပ်‌‌ပေါက်‌‌တွေအ‌ဟောင်‌းသား ဖြစ်‌သွားတဲ့အထိသူ ခဏ ဆွံ့အ သွားခဲ့တယ်‌…
သူ့မျက်‌စိ‌တွေ အ‌ရောက်‌‌တောက်‌လာတယ်‌. .ပြီး‌တော့မှ အသံတုန်‌‌လေးနဲ့ ကျ‌နော်‌့အတွက်‌လား တဲ့….ဟုတ်‌တယ်‌ ညီ‌လေး ညီ‌လေးအတွက်‌ ဟိုးအ‌ဝေးကြီးက‌နေ ခက်‌ခက်‌ခဲခဲ သယ်‌လာခဲ့တာ ဆို‌တော့
သူဘာ‌မှ‌ပြန်‌မ‌ပြော‌တော့ဘူး ‌ကျေးဇူးတင်‌ပါတယ်‌ဆိုတဲ့အကြည်‌့နဲ့ စက်‌ဘီး‌ပေါ်တက်‌ခွလိုက်‌တယ်‌…သူ့အိပ်‌မက်‌‌တွေ တကယ်‌ဖြစ်‌လာပါပြီ. …